﻿ इटहरीमा एमालेलाई 'ठूलो नोक्सान', यस्ता छन् कारण
एमाले छक्क पर्ने गरी फेरी दोस्रो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली काँग्रेसले धेरै सिट जितिरहेको छ । हुन त देशकै ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेसको लागि यो जित खासै अचम्म लाग्दो होइन, तर चुनाव हुँदैगर्दा नेपाली काँग्रेस जसरी देशव्यापी रुपमा आलोचित थियो, अनि नेकपा एमालेका केपी ओली जसरी हाइ हाइको पात्र बनेका थिए, त्यसको आधारमा काँग्रेसको जितमा ओली अचम्मित भए ।
उनले चुनावअघि इटहरीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै बोलेका थिए, ‘काँग्रेसलाई भोट दिने कारणै छैन, भोट दिनेहरु पछुताउँछन् ।’ काँग्रेसलाई भोट दिनेहरु पछुताउँछन्, वा पछुताउँदैनन्, त्यो त पछिको कुरा हो । तर चुनावी नतिजालाई लिएर एमाले भने धेरै ठाउँमा पछुताएको छ । धेरै ठाउँ जित्न नसकेपनि आफ्नो आधार इलाकाको रुपमा रहेका ठाउँहरुमा पनि एमाले प्रभावशाली बन्न सकेन । उदाहरण इटहरीले प्रष्ट्याउँछ ।
५० हजार हाराहारी मत खसेको इटहरीको २० हजार बढी मत गनिसक्दा एमाले सात सय मतले अगाडी छ । एमालेले २० वर्षअघिदेखि जित्दै आएको र अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा सात हजार मत अन्तरले जितेको एमालेको लागि यो मतान्तर लज्जास्पद हो । पार्टीभित्रकै केही नेताहरु ठूला नेताले पैसा लिएर जित्नै नसक्नेलाई पनि उम्मेदवारको टिकट दिएको चर्चा चलिरहँदा अन्धभक्त नभइ पार्टी गतिविधि विश्लेषण गर्न सक्ने एमालेका स्थानिय नेता तथा कार्यकर्ताले हारका विभिन्न कारणहरु बताएका छन् :
१. अन्तर्घात : इटहरी एमालेभित्र यो पटक राम्रै अन्तर्घात भयो । मेयरलाई हराउन छुट्टै समुह अनि उपमेयरलाई हराउन छुट्टै समुह लागिपर्यो । यो विषयमा न्यूजलयले चुनावअघि नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । भोटको प्याटर्नले पनि त्यसलाई संकेत गर्छ । मेयर र उपमेयर काँग्रेसलाई, बाँकी एमालेलाई दिएका मतपत्रहरु धेरै छन् । त्यस्तै वडाध्यक्षमा काँग्रेसका उम्मेदवार छानिएका छन् ।
यसबाहेक एमालेमा मानिस जुटाउने र संगठन गर्ने स्थानिय स्तरका केही अगुवाहरुले समेत आर्थिक प्रलोभनमा अन्तर्घात गरेको चर्चा एमालेभित्र चलिरहेको छ ।
२. भिजेको नेतृत्वको कमी : एमालेले इटहरीमा सोचेजस्तो मत ल्याउन नसक्नुमा एमालेबाट उठेका नेताहरुमध्ये कमै मात्र स्थानिय स्तरमा भिजेका छन् । एमालेका मेयर उम्मेदवार आफै इटहरीका सरोकारका विषयमा केही दूरीमा थिए । पछिल्लो समय उनी जिल्ला अध्यक्ष भएपछि त संगठन सुदृढिकरणमै बढी लागे । जसले गर्दा अन्य पार्टीका सदस्यहरुको विश्वास जित्ने गरी घरदैलोमा उनी कमै मात्र पुगे । उनले आठ वर्ष गाविस अध्यक्ष चलाएको अहिलेको वडा नं. १, २० र उनको घर रहेको वडा नं. १७ मै काँग्रेसले वडाध्यक्ष जित्यो ।
३. इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालय : एमाले विगतमा कुनै कारणले आम जनतामा बढी आलोचित थियो भने त्यसको प्रमुख कारण थियो, इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार । सहजै काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, लापरवाही गर्ने उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई हेरेर इटहरीवासीले एमालेलाई सम्झिरहे । कार्यालय एमालेको लागि अपजसे थलो बनिरह्यो । इटहरीवासीको मान्यता थियो कि उपमहानगरपालिकामा जे जति हुन्छ, सबै एमालेले निर्देश गर्छ । एमाले समर्थित कर्मचारीको बाहुल्यता रहेकै कारण इटहरी उपमहानगरपालिकाको भ्रष्टाचारमा एमाले देखेका नगरवासीको भ्रमलाई एमालेले चिर्न सकेन । जसको कारण नगरवासीहरुले विकल्प खोजे ।
४. अति आत्मविश्वास : एमालेले लामो समयदेखि जितेको क्षेत्र भएको कारण एमालेमा आत्मविश्वास आवश्यकताभन्दा बढी थियो भन्नेहरुको कमी छैन । त्यो आत्मविश्वासलाई कतिपयले घमण्डको नाम दिएका थिए । जसका कारण एमाले नेताहरुले चुनावमा खासै सजगता देखाएनन्, वा चुनाव जित्नका लागि जे गर्न आवश्यक थियो, त्यो गरेनन् । उम्मेदवार छनोटदेखि प्रचारप्रसारसम्म त्यो देखियो ।
५. आर्थिक संयोजन क्षमता अभाव : पार्टी नेताको एकात्मक र त्यसमा पनि खर्चको स्रोत संयोजन गर्न सक्ने खुबीको अभावले पनि एमालेलाई यो पटक पछि पार्यो । स्रोत परिचालन गर्ने मामिलामा एमाले कमजोर रहेपछि काँग्रेसले त्यसको फाइदा उठायो । आर्थिक स्रोतको तयारी गरेर लागिपरेको काँग्रेसले स्थानिय स्तरका युवादेखि मतदातासम्मलाई रिझाउन सकेको चर्चा चलेको छ ।
६. फैलिएको क्षेत्र : इटहरीमा एमालेले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दा नौ वटा वडा थियो । अहिले २० वटा वडा बनेको छ । थपिएका वार्डहरुमा एमालेले जनपरिचालन राम्रो गर्न नसकेको आरोप लगाइने गरीन्छ । तथापी संविधानसभाको चुनावमा एमालेले यही क्षेत्रभित्रबाट सात हजार मत अन्तरले अग्रता कायम गरेको थियो । त्यसैले उपमहानगरपालिका बन्दैमा एमाले हार्यो भन्ने तर्कसँग असहमत हुने ठाउँ छन् ।
यसबाहेक प्रतिष्पर्धीको सक्षमताले पनि एमालेलाई कमजोर बनायो । विगत केही वर्षयता एमालेले नगर परिषद्मा समेत प्रभावकारी उपस्थिती जनाउन सकेन । जसको कारण अन्य पार्टीहरु शक्तिमा आए । प्रदेश नं. १ को महानगर र प्रदेशको राजधानी दावी गरिरहेको इटहरीको नेतृत्व कसको हातमा जान्छ, त्यो त अब गन्न बाँकी रहेको आधा मतले निक्र्यौल गर्ला, तर जसले जितेपनि मतान्तर चाहिँ धेरै नहुने पक्का पक्की छ ।
(यसअघि गलत पर्न गएका सामान्य भाषागत त्रुटीहरु सच्याइएको छ । - सम्पादक)
प्रदेश १ मा एक महिला सहित थप १३ जनामा कोराना संक्रमण